Waa sidee habka wareegga dhiigga ee faraska | Notti Fardaha
Jenny monge | | Caafimaadka iyo daryeelka
Qodobka Maanta waxaan kuu sheegeynaa mid ka mid ah qaybaha aasaasiga u ah noole kasta: nidaamka wareegga dhiigga. Iyo gaar ahaan tan siman.
Bayoolajiyeyaasha ku xeel dheer xayawaanadan ayaa sheegaya in ku dhowaad 300 oo nooc oo faras ah la heli karo. Nooc kastaa wuxuu leeyahay astaamo gaar ah labadaba muuqaalka kore ee xayawaanka, si kastaba ha noqotee marka la eego shaqeynta jirka dhammaantood waxay lamidyihiin inay horumariyaan una shaqeeyaan si ficil ahaan isku mid ah adoo ka tirsan isla noocyada xoolaha dunida. Sidaa darteed, marka la eego nidaamkooda wareegga dhiigga, iyadoon loo eegin nooca ay yihiin, waxa aad ku ogaan karto maqaalka ayaa ku habboon dhammaan fardaha, nooc kasta oo ay yihiin.
Ma in yar ayaan ka sii fiicanahay qaybtan jidhka xayawaanadan cajiibka ah?
Shaqeynta nidaamka wareegga dhiiggu wuxuu aad ugu eg yahay kan aadanaha iyo kan kale ee xayawaanka. IYONidaamka wareegga dhiiggu wuxuu ka kooban yahay nidaamka wadnaha iyo xididdada, waxaa sameeya wadnaha iyo marinnada uu dhiiggu wareego, iyo nidaamka lugaha. Sidaa darteed xubinta aasaasiga ah ee habka wareegga dhiiggu waa wadnaha, kaas oo mas'uul ka ah dhiigga ku shuba dhammaan qaybaha jirka iyada oo loo marayo xididdada, halbowlayaasha iyo xididdada dhiigga. Dhinaca kale, nidaamka lymfatikada waxaa sameeya maraakiibta lymfatiga, limfaha node iyo laba xubnood: beeryarada iyo thymus. Waxay mas'uul ka tahay nidaamka difaaca jirka ee noolaha naasleyda.
1 Nidaamka wadnaha iyo xididdada dhiigga
2 Nidaamka lymfatiga
Nidaamka wadnaha iyo xididdada dhiigga
Nidaamkani wuxuu mas'uul ka yahay soo saarista iyo kicinta dhiigga si ay u waraabiso jirka oo dhan. A faraska qaangaarka ah wuxuu leeyahay qiyaastii 9 litir oo dhiig ah jirkaaga Dhiiggu waa lama huraan sida rarka walxaha muhiimka u ah jirka sida: cuntada, oksijiinta, unugyada habka difaaca jirka, iwm. Waxay kaloo ka caawisaa nadiifinta jirka iyadoo la rarayo qashinka ama kaarboon laba ogsaydhka. Sida haddii tani aysan ku filnayn, waxay sidoo kale mas'uul ka tahay hagaajinta heerkulka jirka.
Nidaamkan Waxay leedahay laba wareeg, mid ayaa mas'uul ka ah inuu daboolo aagga sambabaha midka kalena dhiigga ayuu u qaadaa jirka intiisa kale. Labada wareegba waa wareegto, bilaw kuna dhamaada wadnaha.
Wareegyadan waxay soo bandhigayaan qaabka marka la eego meelaha uu dhiiggu soo maro: wadnaha, halbowlayaasha, arterioles, shabakadda qalliinka, xididdada dhiigga, xididdada iyo wadnaha.
El wareegga sambabka ayaa mas'uul ka ah is-weydaarsiga gaaska ee sambabada laga sameeyo. Wareegga dhiigga ee aagga sambabaha ayaa door muhiim ah ka ciyaara nafaqeynta qaybaha qaabdhismeedka sanbabada, dib u dhiska unugyada sambabaha iyo qaybinta oksijiinta uu jidhku qaaday.
Wadnuhu wuxuu ka kooban yahay unugyo muruqyo ah wuxuuna u taagan yahay qaab aad u wareegsan marka laga hadlayo bini-aadamka. Wadnaha faraska qaangaarka ah wuxuu culeyskiisu noqon karaa 3,5 kg. Sida xoolaha kale, qalbiga fardaha wuxuu ka kooban yahay afar godod: laba ventricles, kuwaas oo ah kuwa dhiigga kiciya, iyo laba atria, oo midi dhiig ka qaado sambabada, midna jirka intiisa kale.
Wadnaha waxaa loo habeeyay inta udhaxeysa booska labaad iyo lixaad ee iskeelka.
Waxaan ka soo hadalnay noocyo kala duwan oo marinno ah oo ku jira nidaamka wareegga dhiigga, waxaan ku eegaynaa iyaga hadda in yar oo fiiro gaar ah u leh shaqsi ahaan.
Waa biyo mareenno taas dhiig ka qaado wadnaha una geyso xubnaha kale ee jirka. Iyagu waa tuubooyin dhumuc leh maaddaama ay tahay inay iska caabbiyaan cadaadiska dhiigga ee ka dhashay garaaca wadnaha. Halbawlayaasha dhexdooda waxaa ku kala soocitaan kala duwan oo aan kaliya ku magacaabi doono qodobkaan, waxayna kala yihiin: waaweyn ama laastikada, dhexdhexaad ama murqaha, iyo yar ama arterioles.
Capillaries waa xididdada dhiigga dhexroor aad u yar. Dhexdooda, isweydaarsiga molikuyulo ayaa ka dhex dhaca unugyada unugyada iyo dhiigga.. Waxaa loo abaabulaa kooxo loo yaqaan shabakadaha xididdada dhiigga, kuwaas oo aad u ballaaran isla markaana daboolaya dhammaan xubnaha.
Waxay leeyihiin qaab dhismeed aad ugu eg kan xididdada waxaana sidoo kale loo kala saaraa iyadoo loo eegayo cabbirkooda: xididdada waaweyn, xididdada dhexe iyo xididdada dhiigga ama xididdada yaryar. Xididdada dhexdhexaadka ah, oo qiyaas ahaan qiyaastii 10 mm ah, ayaa ugu badan.
Xididdada Iyaga ayaa mas'uul ka ah qaadista dhiigga ka soo baxa xididdada dhiigga ee wadnaha. Kuwaasi ma kuwaa waxay guud ahaan qaadaan qashinka iyo kaarboon laba ogsaydhka. Qaarbaa jira ka reeban sida xididka sambabka oo sameeya oksijiin si loo qaybiyo.
Marinnada lugaha waxay qaadaan qanjiro, dareere lagu ururiyo unugyada iyo xubnaha jirka oo dhan laguna shubo xididdada waaweyn.
Nidaamka lymfatiga waa mas'uul ka ah dayactirka dheelitirka dareeraha iyadoo la miirayo dheecaanka fara badan ee dhexda ilaa dhiig, sidoo kale wuxuu mas'uul ka yahay difaac si sida shaandhada uga ilaaliya jeermisyada kala duwan jirka gala oo markaa hubiya difaaca jirka. Waxay kaloo ka caawisaa nidaamka wadnaha iyo xididdada xakamee cadaadiska dhiigga xididka iyo xididdada dhiigga.
Haddii nidaamkani xumaado ama xumaado, cudurka qanjirada ee loo yaqaan 'lymphangitis' ayaa soo muuqda.
Lifangitis wuxuu noqon karaa nabar (bakteeriyo cudurada faafa) ama epizootic (fungal cudurada faafa).
Laba xubnood oo aasaasi ah ayaa ku ciyaaraya nidaamka qanjirada: beeryarada iyo thymus. Kuwaas oo aan dooneyno inaan wax yar ka sii sheegno.
Waa xubinta lymfatiga ugu weyn waana masuulka ka ah howlaha difaaca jirka iyo dhiig-baxa. Si xoog leh u waraabiya nidaamka dhiigga, waxay ka saartaa wareegga dhiigga unugyada dhiigga cas ee waxyeellada leh waxayna isku haysaa unugyada dhiigga.
Xubintan bilobedka ah ee ku taal agagaarka wadnaha, waxaa bixiya xididdada dhiigga. Ayaa leh shaqada ugu weyn laga bilaabo dhalashada ilaa qaangaadhnimada waana halka ay ku bislaadaan T lymphocytes.
Ugu dambeyntiina, waxaan dooneynaa inaan u hibeyno qayb yar muhiimada baaritaanka bukaan socodka ee fardahayaga, tan iyo In kasta oo dhaawacyada wadnaha ee ku jira aysan u muuqan sida ugu badan ee noocyada kale ee naasleyda ah, waxaa jira dhaawacyo badan oo muhiim ah oo ay tahay in si sax ah loo ogaado. Sidaa darteed, waxaa lagu talinayaa in xirfadle hubiyo faraskeenna waqti ka waqti.
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » Fardo » Caafimaadka iyo daryeelka » Waa sidee habka wareegga dhiigga ee faraska